Baarlamaanka oo maanta ka doodaya Hindise sharciyeedka Hanti dhowrka guud ee Qaranka – Radio Muqdisho
Baarlamaanka oo maanta ka doodaya Hindise sharciyeedka Hanti dhowrka guud ee Qaranka
Mudanayaasha Barlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kulan ay kaga doodayaan dhameeystirka Hindise Sharciyeedka Hanti dhowrka guud ee Qaranka ku leh xarunta Golaha Shacabka ee magaalada Muqdisho.
Xildhibaan Maxamed Cumar oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya oo lahadlay Radio Muqdisho ayaa sheegay in kulanka baarlamaanka ee maanta uu yahay dhameysirtka hindise sharciyeedka Hanti dhowrka guud ee Qaranka.
“Maanta oo Isniin ah oo ay taariikhdu ku beegantahay 19 ka bisha Janaayo ajandaha kulanka Xildhibaannada waxa uu yahay ka doodista hindise sharciyeedka Hanti dhowrka guud ee Qaranka, oo mudayaasha loo qeybiyay nuqulo ka mid ah hindise sharciyeedkan” ayuu yiri Xildhibaan Maxamed Cumar.
Xildhibaanka ayaa xusay in kalfadhigii ugu dambeeyay ay mudanayasha yeesheen uu Guddoomiyaha Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari mudanayaasha baarlamaanka kula dar daarmay inta aan kaldhifa la xirin 5-ta Febraayo la dhameystiro hindise sharciyeedyo muhiim u ah hiigsiga sanadka 2016-ka.
“In la dhameystiro Hidise sharciyeedka ku saabsan doorashooyinka, meel marinta hindise sharciyeedka Hanti dhowrka guud ee Qaranka, in loo gudbo akhrinta labaad ee dhismaha Maxkamadda Dastuuriga iyo in xukuumadda codka kalsoonida ah la siiyo marka uu soo dhameystiro Ra’iisul wasaaraha” ayuu hadalkiisa ku daray Xildhibaan Maxamed.
Tartan isboorti oo ku saabsan isdhexgalka bulshada oo lagu qabtay Degmada Heliwaa